रोचक महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष किन खोज्छन ? जान्नुहोस
३. दुनियाँको ज्ञान:
४. शान्ति महसुस्:
५. धोका नदिने:
घरमा राख्नुहोस् यी चीज, केही दिनमै हट्छ पैसाको कमी:
केही काम गर्ने समयमा कयौँ पटक हामीलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। त्यसैले हाम्रो काम पुरा हुन पाउदैन्।
यसो हुनुमा हाम्रो घरमा राखेका केही चीज नै दुभाग्र्यको कारण बनेको हुनसक्छ। आफ्नो काममा सफलता प्राप्त गर्न र घरमा पैसाको कमी हुन नदिन घरमा केही चीजको विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ।
घरमा राखिने यी बस्तुका बारेमा ध्यान दिनुहोस्:
१) सयनकक्षमा कहिलै पनि ऐना नराख्नुहोस्। यसो गर्दा पति पत्नीबीच प्राय सानो सानो कुरामा झगडा हुने गर्दछ र सम्बन्धमा फाँटो आउन सक्छ।
२) कहिलै पनि घरमा पैसा राख्ने भाँडो खुल्ला नराख्नुहोस्। यसो गर्दा दरिद्रता आउने र समस्या सधै थपिने गर्दछ। त्यसैले घरमा कहिलै पनि पैसा राख्ने भाँडो बन्द गरेर राख्नुहोस्।
३) यदी तपाई घरमा तिजोरी अर्थात पैसा राख्ने भाँडोलाई कहिलै खाली नराख्नुहोस्। यसो गर्दा घरमा गरिबी र दुभाग्र्यको छाया पर्न सक्छ। पैसा राख्ने भाँडोमा एउटा चाँदीको सिक्का र एउटा रातो रंगको कपडा राख्नुपर्दछ।
४) घरमा झाडु र डस्टबिन कहिलै पनि खुल्ला नराख्नुहोस्। यसले घरमा आउने सकारात्मक उर्जाको रोखिदिन्छ। साथै यो सफलतामा बाधक पनि बन्न सक्छ।
५) घरको पिल्लरको मुनी कहिलै पनि ओछ्यान नलगाउनुहोस्। पिल्लरको मुनी लगाएको ओछ्यानमा सुत्दा कयौँ प्रकारका रोकावट र समस्याको सामना गर्नुपर्दछ।